eNasha.com - बन्द, कति बन्द ?
बन्द, कति बन्द ?
कुनै पनि बहानामा बन्दको घोषणा गर्नु हामी नेपालीको मौलिक संस्कृति हो । २०४७ सालअघि नेपालीले भारतद्वारा गरिएको नाकाबन्दी मात्र अनुभव गरेका थिए । तर प्रजातन्त्रको पुनस्थापनापछि बन्दको संस्कृति नेपालमा जति मौलायो अरु कुनै संस्कृति मौलाउन सकेन । माओवादीले शुरु गरेको सशस्त्र आन्दोलनले त नेपालमा रेकर्ड नै राख्यो बन्दको । बन्दबाट आजित भएर गायक कर्ण दासले त गीत नै रचे- बन्द, कति बन्द ? बरु हातहरु गरिदेऊ बन्द ।
प्रकृतिले काठमाडौँलाई हिउँसँग खेल्न दिएको मीठो उपहार र भ्यालेन्टाइन डेको रमरमी लिन नपाउँदै आदिवासी जनजातिका तर्फबाट काठमाडौँ ठप्प भएको छ । यो ठप्प फागुन १७ गते पनि हुने भएको छ ।
नेपालको राजनीति र राजनीतिज्ञहरु पनि बन्द प्रेमी छन् । उनीहरुलाई बन्द यति प्यारो छ कि आयोजकहरुले बन्दको घोषणा नगरुञ्जेल समस्याका बारेमा केही सुन्न चाहँदैनन् । सडक जाम र टायरहरुको आहुतिपछि मात्र सरकार र राजनीतिक पार्टीको कान ठाडो हुन्छ । अनि उनीहरु समस्या के हुन् र कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर कोठे बैठक शुरु गर्छन् । बैठकमा तुरुन्त निर्णय गर्न नसक्नु र त्यो केही दिनसम्म जारी रहनु सरकार, नेता र पार्टीको सनातन गुण हो ।
उसो भए अब बन्दका दिन के गर्ने त ? के गर्नु नि, इनशासँग त्यो छ जुन तपाइँले आशा गर्नुहुन्छ । आउनुहोस्, तपाइँ र हामी सँगै अब बन्दमा रमाइलो गरौँ ।
तपाइँले बन्दका दिन कतिसम्म बोरिङ अनुभव गर्नु भएको छ ? त्यो बोरिङ समय कटाउन तपाइँले कस्तो उपाय अपनाउनु भएको छ ? यदि तपाइँसँग बन्दका बारेमा रमाइला अनुभव, रमाइला फोटाहरु छन् भने हामीसँग बाँड्नुस् । ती अनुभव अरुका लागिसमेत प्रेरक र रमाइला हुनसक्छन् ।